Tirada Soomaalida Isu Diyaarinaysay Sannadkan Gudashada Xajka Iyo Rajadii Laga Qabay Oo Meesha Ka Baxday |
Tirada Soomaalida Isu Diyaarinaysay Sannadkan Gudashada Xajka Iyo Rajadii Laga Qabay Oo Meesha Ka Baxday
Hargeisa(GNN):-Muslimiin badan ayaysan sanadkan u suurtageli doonin in ay gutaan waajibaadkooga Xajka sababo la xiriira cudurka safmarka ah ee Covid-19. Dhawaan ayay ahayd markii boqortooyada Sacuudi Carabiya ay shaacisay in gebi ahaanba aanay mamnuuceyn Xajka balse laga mamnuucayo oo kaliya dadka dibadda ka soo xajinaya, si loo xakameeyo faafitaanka feyraska Karoona. Bayaan ay soo saartay warbaahinta dowladda Sucuudiga ayaa lagu sheegay in tiro aad u kooban oo hadda ku nool gudaha boqortooyada oo kaliya loo ogolaan doono in ay sanadkaan gutaan waajibaadkaasi diiniga ahi.
Haseyeeshee sanadkan, khubaradu waxay saadaalinayaan in kun qof oo ka tirsan 29-ka milyan ee deggan dalkaasi Sucuudiga oo kaliya loo ogolaan doono in ay Xajka gutaan. Mas’uuliyiinta ayaa sheegaya in tani ay tahay habka kaliya ee ay awood ugu yeelan karaan sameynta qorshayaal ay dadku ku kala fogaynayaan, taasi oo dadka ka dhigi doonta in ay si nabad ah u cibaadaystaan. Sacuudi Carabiya waxay diiwaangelisay 161,005 xaaladood oo cudurka Karoona ah iyo 1,307 dhimasho ah. Sannad kastaa xilliga Xajka, malaayiin qof ayaa ugu horreyn waxay isugu tagaan teendhooyin ku yaal magaalada Mina, ka dibna waxay u dhaqaaqaan dhanka buurta Carafa iyo goobo kale oo barakeysan. Halkaasi waxaa ku kulmi jiray xujey ka kala yimid daafaha caalamka, taa oo Xajka ka dhigeyso astaan muhiim u ah dadyowga Muslimiinta.
Dowladda Soomaaliya ayaa iyadu soo dhaweysay go’aankaasi Sucuudiga, waxaana wasiir ku xigeenka arrimaha diinta ee Soomaaliya, Cismaan Aadan Dhuubow, uu sheegay in bilihii dhawaaaba laga arrisnayay waxa laga yeelayo arrinta Xajka ee sanadkan. “Ka dowlad ahaan iyo ka mas’uuliyad ahaanna waxaan leenahay dareenka caalamka oo si gaar ah iyaga ku ahaa…oo amuurtaan culeyskeeda leh oo aan garaneyno in uu aafeeyay kulli. Go’aankaasi ay qaateen, ka dowlad ahaan waxaan u aragnaa mid waafi ah oo aan soo dhaweynayno,” ayuu yiri Cismaan Aadan Dhuubow.
Wasiir ku xigeenku wuxuu sheegay in Soomaaliya ay sanadkan rajeynaysay in dad gaaraya ilaa 11,000 oo qof ay ka soo xajiyaan balse sababo la xiriira cudurkan Covid-19 ay haatan arrintaasi meesha ka baxday. Inkastoo haatan ay tahay markii ugu hooreysay oo dowladda Sucuuudigu ay albabaada ka xirato dadka dibadda ka soo xajinaya, haddana ma ahan markii ugu horreysay oo Xajka la baajiyo inta la ogyahay taariikhda Islaamka. Sheekh Maxamed Cabdu Uma loo ka mid ah culimada ugu caansan Soomaalida ayaa BBC-da u sheegay in haatan ay tahay markii ugu horreysay inta la ogyahay oo acmaasha Xajka loo baajiyo cudur awgii, balse haatan ka hor ay dhacday in kooxo ay qabsadeen Xaramka oo ay laayeen xujeydii halkaa u tagtay gudashada waajibaadka Xajka. “Waxaa dhacday xilliyo ay qolyo Qaraamidha la dhihi jiray oo kharibnaa ay Xaramka qabsadeen oo xujey badan ay ku laayeen. Asalkooda Shiica ayay ahaayeen nimankaasi, oo xujeydii ay laayeen oo Xajkii ay dadka ka hor istaageen waa ay soo martay laakiin xilli cudur loo joojiyay taariikhda ma soo marin,” ayuu yiri Sheekh Maxamed Cabdi Umal.
Dhaqaalahaasi ayaa u dhigma 20% dakhliga dalka Sucuudiga marka laga reebo dhaqaalaha uu dalkaasi ka helo saliidda. Shirkadaha xujeyda qaada ayaa waxa ay sanadkan ku khasbanaadeen in dad badan ay u celiyaan kharashkii ay la bexeen ee ay Xajka ku aadi lahaayeen, waxaan sida shirkadaha qaar ay sheegayaan sanadkan soo wajahay dhaqaale xumo aad u weyn. Dowladda Sucuudi Carabiya waxay sidoo kale sanadkan lumineysaa arrin ay aad ugu faani jirtay oo ah in sanad kastaa ay martigeliso kulanka ugu weyn caalamka oo ah Xajka, kaa oo sidoo kale ay dhaqaalena ka heli jirtay.